स्विस बैंक खाता गोपनीयता अझै आफ्नो कानूनी क्षेत्र मा कानूनी
स्विस बैंक गोपनीयता बुझ्दै
स्विस बैंक गोपनीयता १ 1934 XNUMX को बैंकि Act ऐनबाट शुरू भयो। यस ऐनले तेस्रो पक्षलाई खातावालाको जानकारी खुलासा गर्‍यो। नतिजा स्वरूप, पर्याप्त पूंजी स्विट्जरल्याण्ड मा कफर्स बैंक मा आफ्नो बाटो फेला। आजको परिदृश्य अलि फरक छ। जे होस्, स्विसले यस ग्रहमा केही सब भन्दा कडा र सब भन्दा बलियो बैंकहरू घमण्ड गर्दछ। तपाई सरकारबाट पैसा "लुकाउन" सक्नुहुन्न। तर तपाईं आफ्नो फंडहरू कानूनको कवचबाट सडकमा तल झार्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको आँखाले तपाईंलाई अर्को खाना खोज्दै भोका सिंहहरूको प्याकले मन पराउँदछ।
यसैले, यदि तपाइँ तपाइँको सम्पत्ति सुरक्षा योजनाबाट अधिक लाभ लिन चाहानुहुन्छ, बैंकि secre गोपनीयताका लागि प्रतिष्ठा भएको एक अपतटीय बैंकिंग देश खोज्नु महत्वपूर्ण कारक हो। तपाईंलाई आवश्यक भएको बेला त्यहाँ तपाईंको सम्पत्तिहरू सुनिश्चित गर्न उत्तम विधिहरू मध्ये कुन एक हो? आफूलाई तिनीहरूबाट टाढा राख्नुहोस्। त्यसोभए, एक अपतटीय सम्पत्ति संरक्षण ट्रस्ट स्थापना गर्दैछ जुन एक अपतटीय LLC को स्वामित्व राख्दछ, र यस संरचना भित्र एउटा स्विस बैंक खाता छ जुन तपाईंको सुरक्षा गर्दछ गोपनीयता त्यो गर्नका लागि राम्रो तरीका हो।
हो, तपाइँको ग्राहकहरुका नियमहरु स्विट्जरल्याण्डमा परिवर्तन भएका छन्। साथै, स्विस बैंकहरूले तपाईंलाई आफ्नो करहरू रोक्न मद्दत गर्दैन। तर गोपनीयता बलियो छ। त्यो हो, स्विस नियमहरूले अझै पनि एक मुद्दाको लागि एक सक्षम उम्मेदवार हो कि भनेर हेर्न चाहनेहरूको आँखा रोक्ने आँखा अन्धा गर्दछ।
धेरै वित्तीय पेसाकर्मीहरु सहमत छन् कि केहि देशहरु स्विट्जरल्यान्ड प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् जब यो बैंकि secre गोपनीयता को कुरा आउँछ। देशसँग उनीहरूको खाताधारकहरूको रक्षा गर्न र खाता बेनामी कायम राख्नको लामो इतिहास छ। यस लेखले त्यो इतिहासलाई जाँच गर्नेछ। साथै, यसले स्विट्जरल्याण्डमा बैंकिंगमा रुचि राख्ने व्यक्ति वा कम्पनीहरूका लागि के अर्थ हुन सक्छ भन्ने कुराको अन्वेषण गर्दछ।
बैंक गोपनीयतालाई गम्भीरतापूर्वक लिदै
स्विजरल्याण्ड एक मुट्ठीभर देशहरू हो जसले आफ्ना ग्राहकहरूको बैंक खाताहरू निजी र सुरक्षित राख्न थप उपायहरू लिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्ग यी आठ मध्ये उद्धृत बैंक गोपनीयता कानूनको साथ देशहरू स्विट्जरल्याण्ड, लिक्टेनस्टीन, डेनमार्क, अस्ट्रिया, सिंगापुर, ह Hongक Kong, पनामा, र उरुग्वे सहित। प्रत्येक देशसँग संरक्षण र ग्राहक गोपनीयताको बिभिन्न स्तरहरू छन्। तर ती सबैसँग उचित कानुनी उपकरणहरूसँग मिलाउँदा कडा सम्पत्ति सुरक्षा र गोपनीयता हुन्छ।
जब यी केवल निजी मा हेर्दा गोप्य बैंकिंग देशहरू छन्, एउटा कुरा बुझ्न यो महत्वपूर्ण छ। त्यो हो, त्यहाँ अझै पनी "ग्राहकलाई चिन्नुहोस्" कुनै खाताको सिर्जनासँग नियमहरू हुनेछन्। तपाईं कुन बैंक रोज्नुहुन्छ भन्ने फरक पर्दैन, बैंकलाई प्रक्रियाको सुरूमा उनीहरूको ग्राहकहरूको पहिचान जानकारी आवश्यक पर्दछ। खाता सिर्जना चरणमा यस जानकारी प्राप्त गर्नु कुनै पनि अवैध बैंकि and र मनी लॉन्ड्रिंगबाट बच्नु हो। कमसेकम यी बैंकहरूलाई नागरिकता र हालको निवासको प्रमाण चाहिन्छ। बैंकले अन्य कागजातहरूको पनि अनुरोध गर्न सक्छ। यसमा IRS W-9 फारममा हस्ताक्षर समावेश हुन सक्छ। बैंकले तपाईंको कर भुक्तानीकर्ता पहिचान नम्बर (TIN) पुष्टि गर्न आवश्यक गर्दछ र खाता अवस्थित छ भनेर IRS लाई सूचित गर्नुहोस्।
यदि बैंकि banking गोपनीयता कानून सहित धेरै देशहरू छन् भने, तपाईं स्विट्जरल्याण्ड किन यो लेख मा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ। किन स्विस बैंकहरु प्रसिद्ध छन्, र तिनीहरूको प्रतिष्ठा कहाँबाट आयो? सरल उत्तर यो हो कि जब यो बैंकि privacy गोपनीयताको कुरा आउँछ, विज्ञहरू अझै प्रायः स्विजरल्याण्डलाई सूचीको शीर्ष तिर दाँज्छन्।
यूरोब्लागले धेरै कारणहरू उल्लेख गरेको छ जुन मानिसहरूले स्विजरल्याण्डलाई छान्छन्। यी मध्ये एउटा स्विजरल्याण्डको आर्थिक र राजनीतिक स्थिरता हो। बीसौं शताब्दीका प्रमुख यूरोपीय द्वन्द्वहरुमा देश तटस्थ रहेको छ। यस तटस्थताले जफत र नोक्सान बिरूद्ध सम्पत्ति सुरक्षित गर्न यो एक आदर्श स्थान बनाएको छ।
कम करहरू पनि ठूलो आकर्षित हुन्छन्। स्विजरल्याण्डमा विदेशी खातावालाहरूले आयमा स्विस कर तिर्नु पर्दैन, जबसम्म आय स्विस कम्पनी वा स्टकबाट आउँदैन। संख्यात्मक खाताहरू पनि, यस अपतटीय बैंक देश मा कडा अपील आयोजित। क्रमांकित खाताहरूले खाताको नाममा तिनीहरूको खातामा नम्बर निर्दिष्ट गरेर होल्डरको पहिचान सुरक्षित गरे। बैंकले यी खाताहरू सार्वजनिकमा वा बैंकका प्रायः कर्मचारीहरूलाई खुलासा गरेन। क्रमांकित खाता अब उपलब्ध छैन। यस प्रकार, आधुनिक समयमा, व्यक्तिहरू गोपनीयता बढाउनको लागि एक अपतटीय LLC को नाममा स्विस खाताहरू खोल्दछन्।
वास्तवमा, त्यो सबैभन्दा ठूला चीजहरू मध्ये एक हो जसले स्विट्जरल्याण्डलाई बैंकिंग विश्वमा प्रसिद्ध बनाएको छ; तिनीहरूको कम्पनी खाता होल्डरहरूको बेनामी। यस गोपनीयताले धेरै व्यक्तिलाई कानुनी मुद्दाहरू, जटिल व्यापार सौदाहरूको बीचमा, वा तिनीहरूको गृह देश राजनीतिक वा आर्थिक रूपमा अस्थिर हुँदा पनि आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न अनुमति दिएको छ। हामी निम्न सेक्सनहरूमा स्विस बैंकिंग गोपनीयताको समृद्ध ईतिहासको बारेमा बढी कुरा गर्ने छौं।
परम्परा शुरू गर्दै
अनुसार, स्विस बैंक गोपनीयता 300 वर्ष भन्दा पहिले शुरू भयो कसरी काम गर्दछ। फ्रान्सका राजाहरूलाई राम्रो बैंकि options विकल्पहरू चाहिएको बेलामा यो सबै सुरु भयो। उनीहरूलाई कडा गोप्यता चाहिएको थियो, पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरू थिए, र उनीहरूको backण फिर्ता गर्ने क्षमता सामान्यतया थियो। यस आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, त्यस समयका स्विस बैंकरहरूले खातावालहरूको लागि अपतटीय बैंकिंग सम्बन्धमा गोपनीयता कोडहरू विकास गरे। यद्यपि यो रोयल्टीबाट सुरु भएको थियो, यस बैंकरको कोडले वित्तीय शरण लिन खोज्ने कसैको लागि स्वर्गको रूपमा स्वीजरल्याण्डको प्रतिष्ठा लागायो।
केहि वित्तीय कानून यो पनी फिर्ताको मिति। १ Gene१1713 मा जेनेभाको ग्रेट काउन्सिलले नियमहरू स्थापना गर्‍यो जुन सबै बैंकरहरूलाई उनीहरूको ग्राहकहरूको दर्ता हुनुपर्दछ। एकै समयमा, यसले तिनीहरूलाई बैंक बाहिर जानकारी साझा गर्नबाट निषेध गर्दछ। यस आवश्यकतालाई अपवाद हुन सक्छ यदि सूचनाको लागि आवश्यक पर्ने आवश्यकतालाई नगर परिषदले सहमति दिएमा। यद्यपि यस समयमा त्यहाँ कुनै विज्ञहरू रिलीज गर्ने बैंकरहरूको लागि कुनै आपराधिक आरोप थिएन। त्यस बेला, केवल नागरिक कानूनले बैंकिंग गोपनीयतालाई नियमित गर्‍यो। तर परिवर्तन भयो, १ 1934 .XNUMX को बैंकिंग ऐनसँग।
१ 1934 XNUMX को स्विस बैंकिंग ऐन
स्विस बैंकिंग बीसौं शताब्दीअघिको कानून नागरिक कानूनको उपज रह्यो। माथि उल्लेख गरिए अनुसार स्विस बैंकिंग ऐन १ 1934 .XNUMX ले बैंकि banking गोपनीयतालाई राष्ट्रिय कानूनमा राख्यो। द गार्डियनले व्याख्या गरे अनुसार यस कार्यको सृष्टिको पछाडि ठोस कारण छैन। कसै-कसैले यसलाई नाजीहरूको संरक्षणको श्रेय दिइरहेका थिए जसले राज्यको शत्रु हो भनेर उनीहरूको खातामा अनुसन्धान गर्न थालेका थिए। अरूले अनुमान लगाए कि यस ऐनको सृष्टि फ्रान्सेली घोटालामा प्रतिक्रिया थियो। मिडिया ईन्धनको घोटालाले राजनीतिज्ञ र चर्चका नेताहरू सहित धेरै ठूला व्यक्तिको अघोषित खाताहरूको पर्दाफास गर्‍यो।
कारण जेसुकै होस्, स्विस बैंकिंग ऐन १ 1934 .XNUMX ले स्विस बैंकहरूको लागि आफ्नो ग्राहकको परिचय बैंक बाहिर कसैलाई पनि प्रकट गर्नु एउटा आपराधिक अपराध बनायो। बैंक भित्र पनि, केवल थोरै बैंकरहरूले ग्राहकको परिचय चिनेका थिए। यो विशेष गरी नम्बरित खाताहरूको लागि मामला थियो। हो, तिनीहरूले कानून संशोधन गरेका छन् र केहि चीजहरू परिवर्तन भएको छ। यद्यपि स्विस बैंकरले गोप्यता उल्लंघन गरेकोमा तीन वर्ष जेल सजाय दिइन्छ।
स्विस बैंक गोपनीयता कानून
स्विस बैंकहरू यत्तिको विश्वासिला हुनुको एउटा कारण यो हो कि उनीहरूले आफ्नो बैंकि laws्ग कानूनहरू बर्षौंसम्म परिष्कृत गरे। स्विस विधायिका ढाँचामा भएको कुनै परिवर्तनलाई कम्तिमा संसदबाट र कहिलेकाँही जनस by्ख्याबाट पनि स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानून कार्यालयले भने १ 1984। 1998 मा, स्विट्जरल्याण्डको जनसंख्याले मतदान गर्‍यो र बैंकि secre गोपनीयतालाई दबाउनको लागि गरिएको उपायलाई अस्वीकार गर्‍यो। सन् १ 2000 77। मा संसदले बैंकि secre गोपनीयताको खारेजीलाई अस्वीकार गर्न मतदान गर्‍यो। २००० मा स्विस बैंकर संघ (एसबीए) द्वारा गरिएको एउटा सर्वेक्षणले देखायो कि questioned 72% मानिसहरूले प्रश्न गरेका वर्तमान बैंकि privacy्ग गोपनीयता कानूनको समर्थन गर्दछन् र of२% ले युरोपेली संघले माग गरे पनि उनीहरुको उन्मूलनको विरोध गर्दछन।
तथापि, स्विस कानून अपराधीहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि सिर्जना गरिएको थिएन। स्विस गोपनीयता नियमहरू मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, स्टक हेरफेर, कर ठगी, र अधिक सहित आपराधिक कार्यवाहीमा हटाइन्छ। जुलाई १ 1977 .1990 मा, डिलिजेसनको व्यायामको पहिलो संस्करण एसबीए द्वारा जारी गरिएको थियो। यसको उद्देश्य "तपाइँको ग्राहकलाई चिन्नुहोस्" को सिद्धान्तहरुलाई सुदृढीकरण गर्नु र कर चोरी वा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी उडानलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्रिय रुपमा संघर्ष गर्नु थियो। स्विस फौजदारी संहितामा नयाँ लेख १ 2000 XNUMX ० को अगस्टमा मनी लॉन्ड्रिंगमा थपिएको थियो। यसका साथै बैंकहरूले उचित कारणले परिश्रम गर्न नसकेकोमा दण्डहरू पनि समावेश गरे। स्विस विधायिकाले भ्रष्टाचारको बिरूद्ध लेख थप्यो। यसमा स्विजरल्याण्ड बाहिरका सार्वजनिक अधिकारीहरूको भ्रष्टाचार पनि समावेश थियो। यी २००० को मेमा स्विस फौजदारी संहितामा थपियो।
सूचनाको स्वचालित एक्सचेन्ज (AEOI)
जनवरी १, २०१ 1 मा स्विट्जरल्याण्डले सूचनाहरूको स्वचालित आदानप्रदान (AEOI) प्रणाली अपनाएर अन्य देशहरूको मेजमा सामेल भयो, RT व्याख्या गर्दछ। संघीय वित्त विभागका अनुसार यस स्तरलाई अपनाउने अन्य देशहरूमा अर्जेन्टिना, मेक्सिको, ब्राजिल, उरुग्वे, भारत र दक्षिण अफ्रिका समावेश छन्। स्विट्जरल्याण्डले कुल countries 38 देशहरूको साथ स्वत: सूचना विनिमयमा सहमति जनाएको छ र अधिकसँग प्याटमा काम गरिरहेको छ।
AEOI विश्वव्यापी मानक हो जुन आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (OECD) द्वारा कर चोरीविरुद्ध लड्नको लागि शुरू गरिएको हो। यस मानक अन्तर्गत, सबै बैंकहरूले स्वदेशी ग्राहकहरूको जानकारी विदेशी नागरिकहरूमा डाटा सहित राष्ट्रिय कर अधिकारीहरूलाई पठाउँछन्। बैंकले यसको फलस्वरूप ग्राहकको घर देशमा सूचना कर अधिकारहरू पुर्‍याउनेछ। संस्थाले वर्षमा एक पटक यो जानकारी साझेदारी गर्दछ, र AEOI दुबै तरीकाले काम गर्दछ। स्विजरल्याण्डले उनीहरूका नागरिकहरू द्वारा राखिएको विदेशी खाताहरूको जानकारी पनि प्राप्त गर्नेछ।
यस मानक भनेको धनी विदेशीहरूलाई स्विट्जरल्याण्डमा अघोषित पैसा लुकाउन रोक्न र विश्वव्यापी कर कानून अनुसरण गरिरहेको छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न हो। यसले खातावालाहरूका लागि केहि पनि परिवर्तन गर्दैन जुन स्विजरल्याण्ड र उनीहरूको देशको कर कानूनहरू पछ्याउँदै छ। स्वीस सरकारले उक्त सम्झौताको बारेमा एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो, "यसले स्विजरल्याण्डको वित्तीय केन्द्रको प्रतिस्पर्धा, विश्वसनीयता र अखण्डतालाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्नेछ।"
मुख्य कुरा के हो भने, स्विसले सम्मानजनक मानिसहरूलाई उनीहरूको आर्थिक स्रोतहरूको लागि सुरक्षित आश्रय दिनेछ। जहाँसम्म, तिनीहरूले कानून भ break्ग गर्न मद्दतको लागि नालीको रूपमा काम गर्छन्।
जब तपाईं स्विजरल्याण्डमा आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न तयार हुनुहुन्छ, आवश्यकताहरू तपाईंले छनौट गरेको बैंकमा निर्भर गर्दछ। तपाईको सम्पत्ति सुरक्षाबाट अधिक प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न, यस पृष्ठमा पहिलो फोन नम्बरमा सम्पत्ति संरक्षण परामर्शदातासँग परामर्श लिन नबिर्सनुहोस्। हामी तपाईलाई स्विस बैंकि system प्रणाली नेभिगेट गर्न मद्दत गर्न सक्छौं र यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकताको लागि उत्तम खाता पाउनुहुनेछ।
स्विजरल्याण्डमा 400०० भन्दा बढी बैंक छन्, CNBC भन्छन, विभिन्न प्रकारको छनौट गर्नका लागि। A स्विस बैंक खाता न्यूनतम निक्षेप सामान्यतया सय हजारमा सुरू हुन्छ, औसत at २,250,000,००० भन्दा माथीको साथ। खातावालाहरू कम्तिमा १ 18 वर्षको हुनुपर्छ। धेरै बैंकहरूलाई तपाईंको वा वित्तीय सेवा कम्पनी चाहिन्छ, जस्तै हाम्रो फर्म, खाता खोल्ने प्रक्रिया समाप्त गर्न।
आज हाम्रो एक अनुभवी सम्पत्ति सुरक्षा परामर्शदाताहरूसँग कुरा गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि स्विस बैंकि secre गोपनीयताको फाइदा उठाउनु तपाईंको सम्पत्ति सुरक्षा योजनाको लागि राम्रो छ कि छैन। तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ माथिको एक नम्बरमा कल गरेर वा यो पृष्ठमा फारम प्रयोग गरेर।
अन्तिम अपडेट १ May मे, २०१ 13